Taratasim-Baovaon’ny RV: Fifantohana amin’ny fahafahana miditra amin’ny nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2022 12:14 GMT
Fangon'ny Andro Erantany Fanentanana momba ny Fahafaha-miditra aterineto (Mindymorgan, CC BY-SA 4.0, tao amin'ny Wikimedia Commons)
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovaontsika isam-bolana dia manome famintinana ireo lahatsoratra am-bilaogy vao haingana miresaka momba ny lafiny rehetra mahakasika ny fampiatiana nomerika, toy ny fidirana sy ny fampiasana ireo fitaovana nomerika, ary hatramin'ireo fomba sy hirika samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mba handraisany anjara feno amin'ny aterineto. Vakio eto ny fanontàna teo aloha amin'ity gazety ity.
Arahabaina ianareo mpamaky, toy ny ahoana ny fankafizanao ny volana May? Antenainay hamantana anareo anaty fisainana miabo ity gazetinay ity.
Raha efa lasa singa iray tsy afaka misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny aterineto ho an'ny maro amintsika, dia tsy ny rehetra mihitsy no afaka miditra aminy manerana ny tany. Ankoatra ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa sy ny tsy fahafehezana ny nomerika, singa iray manandanja mandray anjara amin'izany ny fahasembanana.
Mety hisy ny hoe tonga tao amin'ny haban-tranonkala iray tsy tsara voatra loatra isika ka na izay lalan-kizorana ao anatiny aza tsy haintsika akory, na natao hamalifaly fotsiny ny fandrafetana endrika ilay pejy mba hitetezantsika ny votoatiny. Kely loatra ny endri-tsoratra, matroka loatra ny loko… ary tsy maintsy hoe kivy no hiafarantsika ka adabontsika ilay tolotra an-tserasera noheverina ho azon'ny rehetra nidirana. Moa va tsy mahasorena izany? Kanefa, efa mandeha ho azy izany ho an'ireo olona marobe manana fahasembanana.
Vokatr'izany, amin'ity Andro Erantany Fanentanana momba ny Fahafaha-miditra ity (19 May), manasa anareo izahay mba handany fotoana kely handinika ny momba ny lanjan'ny fahafahana miditra amin'ny nomerika sy izay azon'ny tsirairay atao mba hisian'ny fampiatiana bebe kokoa. Tianay ny handre izay eritreritrareo!
TE-HAHAFANTATRA MISIMISY KOKOA MOMBA NY BILAOGY RISING VOICES
Amin'ny fanombohana ny fitetezana IDIL2022–2032 iarahana amin'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, entin'ny Rising Voices sy ireo mpiaramiasa aminy ho antsika ny andiany iray hafa amin'ireo fanentanana mihodina ataonay ao amin'ny Twitter. Liana ny hahafantatra ireo teny zanatany, vitsy mpampiasa, an-dalam-panjavonana na zara raha misy mpanohana ve, ary te-hahafantatra ny anjara toerana raisin'ny aterineto sy ny teknôlôjia amin'ny fanandratana azy sy ny fanomezana aina vao azy ireny? Tongava manaraka anay sy mihaino izay zarain'ireo vahiny nasainay!
Tù'un Sà'án Sàvǐ ñà Yukúnanǐ Project [es] amin'ny fiteny Yucunani Mixtec (Sà'án Sàvǐ), iresahana ao San Juan Mixtepec any Oaxaca, Meksika
Jhonnatan Rangel [es] amin'ny fiteny Ayapaneco, ifampiresahana ao Tabasco, Meksika
Selene Galindo/Masa'n [es] amin'ny fiteny O’dam (a Uto-Aztecan language), ifampiresahana ao Durango, Meksika
Luis Ramón Alvarado Pascasio [es] amin'ny fiteny Tseltal (a Mayan language), ifampiresahana ao Chiapas, Meksika
Amrit Sufi amin'ny fiteny Angika, ifampiresahana betsaka ao Bihar, India
Zubair Torwali amin'ny fiteny Torwali, ifampiresahana any avaratr'i Pakistàna
Ọmọ Yoòbá amin'ny fiteny Yorùbá, ifampiresahana betsaka ao atsimo-andrefan'i Nizerià
Oratile Olivia Gabaphethe amin'ny fiteny Setswana, teny zanatany ao Afrika Atsimo sy Botswana
Mirjam Vellinga amin'ny fiteny Frisian, ifampiresahana ao Fryslân, Pays-Bas
Efa eo ihany isika, dia iangavianay ianareo hanaraka anay ho any amin'ny Nosy Navarino ao Shily ka hamerina ny tsiaro an'ilay mpikatroka ho an'ny fiteny Yaghan, izay nodimandry teo amin'ny faha-93 taonany tamin'iny Febroary iny. → “Ny lova navelan'ny mpiteny Yaghan farany ao Shily”
Tianay ihany koa ianareo hanjohy anay amin'ny famantarana ny ifandraisan'ny hamaroan'ny media amin'ny hamaroam-piainana, hatramin'ny fomba mahatonga ny fidirana amin'ny aterineto, ampiarahana amin'ny fanofànana momba ny media, ho lasa fanoitra ho an'ny fifampiresahana momba ireo olana manandanja momba ny fiovàn'ny toetrandro sy ny tontolo iainana. → “Reframing narratives about climate change in Bolivia’s Gran Chaco region (amin'ny fiteny anglisy)”
Manana tantara iray ho lazaina amin'izao tontolo izao saingy voakendan'ny tsy fananana famatsiambola ve? Amin'ny alàlan'ny fomba famatsiambola isankarazany, ny IDFA Bertha Fund dia mikatsaka ny hanohana ireo tetikasa mendrika ny ho atao sarimihetsika. Iangaviana ianao hijery eto momba ireo daty telo, fetra farany ho an'ny volana Jona.
Mandray fisoratana anarana izao ny Endangered Languages Project (Tetikasa momba ireo Teny Tandindonin-Doza) ho an'ny fotoam-piofanany Lohataona 2022! Raha olona mahafehy ny nomerika ianareo, izay mankafy ireo fiteny zanatany sy an-dalam-paharinganana, mety ho vintana goavana ho anao ity mba hampiharanao ny traikefa anananao amin'ny zavatra mahaliana anao, sy hahazoanao traikefa amin'ny fandraketana sy fanomezana aina vao ny fiteny (ato ny antsipirihany). Fanombohan'ny fandinihana antontan-taratasy: 19 May 2022
Why embarking on accessibility work in the digital rights community is important (amin'ny fiteny anglisy) via Team CommUNITY @ ARTICLE 19
Digital Platforms Provide Community for People with Physical Disabilities, If Websites Are Accessible (amin'ny fiteny anglisy) via InclusionHub
Improving Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for Mental Health Disabilities (amin'ny fiteny anglisy) via InclusionHub
Isaorana i Eddie Avila sy Ameya Nagarajan tamin'ny nandraisany anjara tao anatin'ity taratasim-baovao ity.